Momba anay - Huaian Huafu Special Casting Nylon Co., Ltd.
H & F · NYLON
Huaian Huafu Special Casting Nylon Co., ltd, natsangana tamin'ny taona 2007, izay misy ao an-tanàna huai'an, tanàna niavian'ny praiminisitra voalohany ao Sina, zhou en lai dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana vokatra nylon isan-karazany ao anatin'izany ny pulley, Slider, Gear, Roller, tanany , ascenseur pulley, mpitari-tady ary ny karazan-java-miloko sy nylon misy endrika manokana.
Ny Huafu dia mamokatra vokatra nylon isan-karazany ao anatin'izany ny pulley nylon, torolàlana amin'ny tady nylon, fitaovana nilon, gasket nylon, bar nylon, slider nylon, roller nylon ary faritra samihafa misy nylon misy karazany manokana. Nandritra ny fivoarana folo taona mahery, Huafu dia nanjary iray amin'ireo mpamatsy vokatra nylon avo indrindra miaraka amin'ny mpiasa zato mihoatra ny injeniera valo ambin'ny folo sy ny sandan'ny vokatra isan-taona mitentina 10 tapitrisa dolara amerikana.
Inona no azontsika atolotra
◉: Vidiny mifaninana indrindra
◉: Fandefasana baiko haingana kokoa
◉: Rafitra fanarahana kalitao matotra
◉: Vokatra nylon namboarina
◉: Serivisy miandry 24 ora
◉: matihanina ekipa teknika
Ny fitaky ny vokatra Nylon dia mitombo be toy ny fampiroboroboana ny toekarena manerantany tato anatin'ny folo taona. Ny vokatra nylon, toy ny fitaovana tsy azo soloina ao amin'ny klioban'ny vokatra plastika, dia nampiasaina be tamin'ny faritra injeniera noho ny fahamendrehany miavaka.
Ny pulley nylon dia nampiasaina tamin'ny ascenseur noho ny tabatabany ambany, ny fanosorana tena, ny fiarovana ny wirerope ary ny fanitarana ny androm-piainan'ny fitaovana rehetra.
Ny vokatra nylon koa dia ampiharina amin'ny crane toy ny pulley, guider tady hampihenana ny fikororohana ary hampihenana ny lanjan'ny milina, ary ny milina ampiasana nylon dia azo ampiasaina amin'ny seranana izay misy ny tontolo iainana mando matetika.
Ny tower crane dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fananganana tanàna, ary ny trano sy tany dia mandrakotra ny 10% amin'ny toekarena manerantany. Ny pulley nylon dia ampahany tsy azo soloina amin'ny dingam-pamokarana crane tower ary mahazaka saika mitovy raha oharina amin'ny vy vita amin'ny vy.
Raha ampitahaina amin'ny gasket metaly, ny gasket nylon dia misy insulation tena tsara, fanoherana ny harafesina, insulation heat, fananana tsy andriamby, lanja maivana kokoa. Noho izany dia be mpampiasa amin'ny semiconductor, automobile, aerospace indostria, haingon-trano anatiny ary sehatra hafa mifandraika amin'izany.
Ambonin'izany rehetra izany, rehefa mandeha ny fotoana dia mihabe ny vokatra nylon no ho vokarina sy ampiharina amin'ny faritra maro. Ho an'ny fahamendrehany tsara, ny ampahany nylon dia manolo tsikelikely ny vy vy. Ary io no fironana ary mahasoa ihany koa amin'ny fampandrosoana ny tontolo iainana. Antenaina fa afaka mifandray aminay ny mpanjifanay, Huafu Nylon`koa mahafeno ny takinao amin'ny vokatra nylon. Miara-manitatra ny orinasantsika izahay, mamorona fifandraisana misy fiaraha-miasa maharitra.